Murteessuu Haala Baqattootaa (RSD) - UNHCR Egypt
UNHCR Egypt balaa tamsa’ina COVID-19 hir’isuun koolugaltoota keenya tajaajiluu itti fufuu akka danda’uuf af-gaaffii RSD fageenya irraa gaggeessuu eegaleera. Waa’ee adeemsa gaaffii fi deebii fagoo karaa viidiyoo kanaa bal’inaan baruu dandeessu:
1. Kaayyoon af-gaaffii haala baqattummaa murteessuu maali?
Af-gaaffiin RSD dhimma kee akka dhiheessitu si gargaaruu fi muuxannoo fi haala kee biyya dhaloota keetii baqachuuf si taasise guutummaatti akka ibsitu si gargaaruudha. Gaaffii fi deebii kana irratti hundaa’uun UNHCR hiika baqattootaa guutuu fi dhiisuu kee murteessee akkaataa seera baqattootaa idil-addunyaatiin sadarkaa baqattummaa ni kenna.
2.	Af-gaaffii Murteessuu Haala Baqattootaa
Yeroo gaaffii fi deebii haala baqattummaa dhuunfaa (RSD) murteessuuf beellama qabaattu, waa’ee af-gaaffii RSD si beeksisuu fi af-gaaffii dura tarkaanfiiwwan fudhachuu qabdu irratti si gorsuuf bilbilli sagantaa siif bilbila. Bilbila sagantaa booda, ergaa gabaabaa liinkii iyyannoo Mallattoo qabu siif ergama, yoo af-gaaffii fagoo irraa akka taasifamuuf walii galte. Kana malees, marsariitiin RSD rsd.unhcregypt.org/refugeeresult.aspx irratti guyyaa beellama keessanii wajjinis ni haaromfama. Beellama RSD irratti jijjiiramni jiraachuu waan danda’uuf, akkasumas yeroo hunda marsariitii akka ilaaltu si gaafatama, keessumaa beellama RSD kee dura sa’aatii 48 dura.
Yeroo adeemsa RSD, akkas gochuun dirqama:
Iyyata keessan ilaalchisee sanadootaa fi ragaa jiru kamiyyuu ni dhiheessa;
Waa’ee miseensota maatii kee si waliin jiran UNHCR beeksisi. Miseensota maatii ga’eessota ta’an dhuunfaan af-gaaffiin ni taasifama;
Dhugaa dubbadhaa tumsa godhaa;
Bilbila ismaartii kaameraa fuulduraa hojjetuu fi interneetii tasgabbaa’aa qabu qabaachuu, yoo gaaffii fi deebii fagoo irraa gaggeessuuf walii galtan;
Kutaa keessa kophaa ta’i, yoo gaaffii fi deebii fagoo irraa walii galte.
Yeroo adeemsa RSD, mirga qabda:
Afaan ittiin wal qunnamsiisuu dandeessaniin af-gaaffii taasifadhaa;
Abukaatoo ykn bakka bu’aa seeraa, kan hojimaata UNHCR’n hundeeffameen akkasitti ulaagaa guutee, yeroo adeemsa RSD keessanitti bakka bu’uuf.
Tokkoon tokkoon iyyataa piroofaayilii, seenaa, fi sababa biyya isaa baqateef adda addaa qaba; kanarraa ka’uun, tokkoon tokkoon dhimmaa dhuunfaan, akkaataa seeraa fi hojimaata UNHCRtiin ni madaalama.
Maaloo, oduu baqattoota biratti waa’ee seenaa addaa baqataa ta’uun akka kennamuuf dhiyaatu ilaalchisee oduu ba’uuf xiyyeeffannoo hin kenninaa.
Itti yaadanii UNHCR waa’ee dhugaa dhimma keetii ykn eenyummaa kee dogoggorsuun hanna. Kun adeemsa dhimma keessanii irratti dhiibbaa hamaa akka fiduu fi murtoo hamaa fiduu akka danda’u hubadhaa. UNHCR haala akkasii keessatti tarkaanfii barbaachisaa ta’e fudhachuuf mirga qaba.
Ibsi fi sanadoonni keessan iccitii ta’anii kan qabaman yoo ta’u, hayyama keessan malee UNHCRn qaama sadaffaa biroof hin qoodamu. Hubadhaa haala kamiinuu UNHCR odeeffannoo keessan mootummaa biyya dhaloota keessaniif hin qoodu.
Sanada kamiyyuu yoo dubbifame, hubatamee fi siin mirkanaa’e malee hin mallatteessiin.
Masrii keessa osoo jirtuu akkuma alagaa kamiiyyuu seera, duudhaa fi duudhaa hawaasa si keessummeessu kabajuun si irraa eegama.
Hojjettoota UNHCR afaanii fi qaamaan doorsisuun seera biyyaalessaa kan cabsudha. UNHCR nama doorsisa akkasii godhu kamiyyuu poolisiitti ni gabaasa namni kun seeratti dhiyaachuu danda’a.
3. Gaaffii fi deebii RSD irratti maal qopheessuu/ fiduu qaba?
Kaardii galmee koolu galtootaa UNHCR keessan;
Sanadoota himannaa baqattummaa keessan deeggaruuf barbaachisoo ta’an kamiyyuu;
Sanada eenyummaa kee fi miseensota maatii keetii jalqabaa (kan akka paaspoortii, waraqaa eenyummaa, kitaaba xiqqaa waraanaa, waraqaa ragaa gaa’ilaa, ragaa dhalootaa, gabaasa yaalaa yoo jiraate fi kkf);
Ragaa kanaan dura Waajjiraalee UNHCR birootti galmaa’uu isaanii.
4. Hojimaata murtii haala baqannaa koo keessatti bakka bu’aa/gorsaa seeraa na gargaaru qabaachuu nan danda’aa?
Yeroo af-gaaffii murtii haala baqattummaa keessanitti bakka bu’aa/gorsaa seeraa isin gargaaru qabaachuuf mirga qabdu. Masrii keessatti, Tajaajilli Baqattoota Saint Andrews (StARS) odeeffannoo, gorsa, rifaralaa, bakka bu’ummaa, fi abukaatoo koolu galtootaa fi baqattoota Masrii keessa jiraniif bilisaan kenna, akkaataa StARS itti ga’an caalaatti beekuuf, maaloo kutaa michoota keenyaa ilaalaa jalatti (tajaajila eegumsaa).
5. Sadarkaa jalqabaa irratti hojimaatni adda addaa maaliif jira?
UNHCR Masriin walxaxiinsa dhimmootaa irratti hundaa’uun hojimaata adda addaa qabdi. Dhimmoonni tokko tokko af-gaaffii tokko keessatti af-gaaffii galmee fi haala baqattootaa (RSD) waliin taasifamu, kunis hojimaata Galmee Walitti Makame/RSD jedhama; dhimmoonni tokko tokko galmee adda addaa fi af-gaaffii RSD qabu; akkasumas dhimmoonni tokko tokko Waajjirri hojimaata RSD xumuruuf odeeffannoo gahaa qabaachuu isaa mirkaneessuuf af-gaaffii RSD tokkoo ol qabu.
6. Beellama RSD yoo na jalaa darbe hoo?
Ibsa madaalawaa malee beellama RSD irratti yoo hin argamne dhimmi keessan cufamuu akka danda’u isin beeksifna. Yoo beellama si jalaa bade, sababa waajjira sanatti dhiyaachuu hin dandeenye ibsuun daftee haaraa gaafachuun itti gaafatamummaa kee ti. Beellamni haaraan kan kennamu maaliif akka hin argamne ibsa madaalawaa yoo kennitan qofa akka ta’e hubadhaa.
7. Miseensonni maatii koo, kanneen na biratti galmaa’an, af-gaaffii murtii haala baqattootaa irratti argamuun dirqamaa?
Namoonni galmee keessatti galmaa’an hundi gaaffii fi deebii haala baqattummaa murteessuuf yoo isin beeksifne malee argamuun barbaachisaadha. Miseensonni ga’eessota dhimmichaa hundi UNHCR keessatti af-gaaffii addaa ni darbu.
8. Baqataa ta’ee yoo beekamtii argadhe maaltu ta’a?
Yoo akka baqattuutti beekamtii argatte, beellama beeksisa bu’aa kan bakka, guyyaa fi sa’aatii ifatti agarsiisu siif kennamaaf. Murtii walitti qabuuf, yeroo UNHCRtti dhiyaattan waraqaa galmee koolu galtoota UNHCR fi sanada eenyummaa keessan (paaspoortii ykn bifa adda baasuu biroo) hojjettoota simannaa UNHCRf dhiyeessuun isin irraa eegama.
Yoo akka baqattuutti beekamtii argatte, atii fi hirkattoonni kee kaardii baqataa UNHCR ni kennamaaf.
9. Baqattummaa yoo na dhowwame maaltu ta’a?
Gaaffii fi deebii sadarkaa jalqabaa booda baqattummaa yoo si dhorkame, beellama beeksisa bu’aa kan bakka, guyyaa fi sa’aatii ifatti agarsiisu siif kennamaaf. Murtii walitti qabuuf, yeroo UNHCRtti dhiyaattan waraqaa galmee koolu galtoota UNHCR fi sanada eenyummaa keessan (paaspoortii ykn bifa adda baasuu biroo) hojjettoota simannaa UNHCRf dhiyeessuun isin irraa eegama.
Guyyaa muudama keessanitti, xalayaan murtii negaatiivii kan isiniif dhiyaatu yoo ta’u, kunis sababoota iyyanni koolu galtummaa akka dhorkamuuf sababa ta’an irratti ibsa of keessaa qaba. Murtii negaatiivii ta’een yoo isin beeksiftan guyyoota 30 keessatti gaaffii ol’iyyannoo dhiyeessuuf mirga qabdu. Murtii sadarkaa jalqabaa iyyata koolugaltummaa kee dhorku irratti ol’iyyannoo dhiyeessu yoo hin barbaanne, kana booda akka nama UNHCR yaaddessutti hin ilaalamtu.
10. Murtee Murteessuu Haala Baqattummaa koo akkamittan naaf beeksisa?
Murtoon RSD kee erga qophaa’ee booda, guyyaa/beellama bu’aa kee agarsiisuuf ergaa gabaabaa ykn bilbila siif ergama. Murtee keessan karaa Iyyannoo Mallattoo fageenya irraa ni beeksifama ykn beeksisa Waajjira keessaa siif beellama. Tokkoon tokkoon nama dhuunfaa mala, bakka fi guyyaa beeksisa isaanii bilbilaan/SMS dhaan ni beeksifama.
Gidduu kana karaa kutaa haala RSD marsariitii kanas ilaaluu dandeessu https://rsd.unhcregypt.org/RefugeeResult.aspx, kan guyyaa/beellama beeksisa bu’aa keessaniis calaqqisu, erga argamee booda. Murtiin iyyata koolu galtummaa kee irratti kennamu beekamtii kennuu ykn diduu ta’uu danda’a.
11. Gaaffii ol’iyyannoo akkamittan dhiyeessu danda’a?
Unka gaaffii ol’iyyannoo kutaa Unkaalee fi Barruulee marsariitii kanaa https://rsd.unhcregypt.org/FormsAndLeaflets.aspx. irraa buufachuu dandeessu. Unka gaaffii ol’iyyannoo keessan keessatti, kanneen armaan gadii dabaluu qabdu:
Sababoota murtoon negaatiivii sadarkaa jalqabaa dogoggora jettee yaaddu,
Odeeffannoo quunnamtii keessan kan haaromfame.
Sana booda unka iyyannoo ol’iyyannoo sirnaan guutame keessan yookaan iimeeliidhaan
Ol’iyyannoo/Deebi’anii Banuu [email protected] yookaan Gamoo RSD daandii 44A, dhiyeenya 2ffaa, Aanaa 8ffaa, Magaalaa Waxabajjii 6 Waxabajjii Magaalaa/October City torbanitti dhiyaachuudhaan dhiyeessuu dandeessu, kunis guyyaa beeksisa isaaniitti namoota dhuunfaaf ni ibsama.
12. Adeemsa ol’iyyannoo keessatti maaltu ta’a?
Hojjettoonni eegumsa UNHCR kanneen murtii sadarkaa jalqabaa jalqabaa keessatti hirmaatan irraa adda ta’an gaaffii ol’iyyannoo hunda gamaaggamu. Gaaffiin ol’iyyannoo hundi gara af-gaaffii ol’iyyannootti hin geessu. Yoo af-gaaffiin ol’iyyannoo barbaachise, guyyaa af-gaaffiin ol’iyyannoo kee karaa ergaa gabaabaatiin ni beeksifama, akkasumas beellamni kutaa haala RSD marsariitii kanaa https://rsd.unhcregypt.org/RefugeeResult.aspx keessattis ni argama.
Murtiin sadarkaa jalqabaa yoo kufe, baqattummaa siif kennama; yoo murtoon sadarkaa jalqabaa mirkanaa’e, faayilii kee ni cufama.